Dagaal ka dhex qarxay 2 dal oo mid Muslim yahay & midkood sheegtay inuu dhul qabsaday | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dagaal ka dhex qarxay 2 dal oo mid Muslim yahay & midkood...
(Baku) 27 Sebt 2020 – MW Azerbaijan ee Ilham Aliyev ayaa sheegay inay ciidamada dalkiisu burburiyeen hub ciidan oo ay leeyihiin Armenia oo weerar kusoo qaaday.
Wasaaradda Gaashaandhigga Azerbaijan ayaa sheegtay in ciidamada Armenia ay dad rayid ah duqaysay, kaddibna ay Baku weerar aargudasho ah ku qaadday “khadka xiriirka” – oo ah aag aad u miinaysan oo kala qaybiya gobol ay labada dal isku hayaan.
“Qaddiyadeennu waa cadaalad waana ka adkaan doonnaa Armenia. Ciidanka Azerbaijan waxay ku dagaallamayaan gayigooda,” ayuu yiri MW Aliyev oo dadka TV-ga kala hadlay isagoo soo xiganaya kelmad uu yiri Hoggaankii Soofiyeetka ee Joseph Stalin bilowgii Dagaalkii 2-aad ee Adduunka, isagoo xusay gobolka ay ku muransan yihiin ee Nagrorno-Karabakh.
“Karabakh annagaa leh, Karabakh waxaa leh Azerbaijan,” ayuu raaciyey iyadoo ay gobolkan oo ay Azeri-gu leeyihiin ay iminka xoog ku haysato Armenia oo naas nuujin ka hesha Ruushka oo ay isku mad’hab yihiin.
Millateriga Azerbaijan ayaa sheeganaya inay iminka 6 tuulo ka xoreeyeen ciidanka Armenia.
Previous articleAkhri lixda su’aalood ee uu Madaxwaynuhu jawaabtooda ka leexday & waxa loo fasiran karo
Next articleGuuleed Yare oo la kulmay aabbaha daroonnada Turkiga carwo-cireedka ugu waynna ka qayb galay + Sawirro